UBamiyan Buddha, Afghanistan ngo-1977
Imbali kunye neNkcubeko Phakathi empuma
Incinci yeBamiyan Buddha e-Afghanistan, 1977. nge-Wikipedia
AmaBuddha amaBamiyan ayingqambileyo ayemi njengendawo ebalulekileyo yezinto zakudala e- Afghanistan iminyaka engaphezu kwewaka. Bayiwona manani amakhulu eBuddha ehlabathini. Emva koko, kwimiba yeentsuku entwasahlobo ka-2001, amalungu aseTaliban awonakalisa imifanekiso yeBuddha eqoshwe kwintlambo ebusweni eBlamyan Valley. Kule ngcelele yeeslayidi ezintathu, funda ngembali yeBuddha, ukutshatyalaliswa kwabo ngokukhawuleza, kwaye yintoni ezayo emva kweBamiyan.
Ibhudha encinci, echazwe apha, yayimitha engama-38 (125 ubude). Yayiqingqiwe ukusuka entabeni ecaleni kwama-550 CE, ngokutsho kohlobo lwe-radiocarbon. Empuma, iBuddha enkulu yayimitha engamamitha angama-55 (ubude obuyii-180), kwaye yavezwa kamva, mhlawumbi malunga ne-615 CE. Ngomnye uBuddha wema kwindawo, esalunamathele eludongeni lwangemuva kunye neengubo zawo, kodwa ngeenyawo ezinyaweni kunye nemilenze ukwenzela ukuba abahambahambayo bajikeleze.
Iimpawu zamatye ezi-statues zangaphambili zagqutywa ngodongwe kwaye emva kwesikhala esibhakabhaka esibhakabhaka esingaphandle. Xa loo ndawo yayingumBuddha, iingxelo zeendwendwe zibonisa ukuba ubuncinci uBuddha wayehlotswe ngamatye agugu kunye neentsimbi ezaneleyo zethusi ukwenzela ukuba kubonakale ngathi yenziwe yenziwe ngobhedu okanye igolide, kunokuba ilitye nodongwe. Ubomi bobabini babonakala benziwe ngodongwe olufakwe kwi-scaffolding yamaplanga; ingenanto engenanto engundoqo engaphantsi kwayo yonke into eyayishiye ngekhulu le-19, ukunika uBamiyan Buddha ibonakale engathandekiyo kubantu abavela kwamanye amazwe abaye bahlangana nabo.
AmaBuddha abonakala ukuba ngumsebenzi wempucuko yaseGandhara , abonisa impembelelo yobuGrisi-yamaRoma ekubambeni iingubo zeengubo. Amancinci amancinci azungeze izitenxo ezithathiweyo abahambahambayo kunye nabahlali; Uninzi lwazo lubonisa udonga olugqwebile ngokugqithisileyo kunye nobugcisa bokubumba obubonisa imifanekiso ebomini kunye neemfundiso zeBuddha. Ukongezelela kumanani amabini aphakamileyo amile, amaninzi amancinci amaBuddha aqoshwe kwintlambo. Ngo-2008, abavubukuli baphinde bafumana ubungqingili bokulala beBuddha, amamitha angama-19 (ubude bamanqina) ubude, enyaweni yentaba.
Ummandla waseBamiyan uhlale unamaBuddha kude kube yi-9 leminyaka. AmaSilamsi ngokukhawuleza ayefudukela eBuddhism kuloo ndawo ngenxa yokuba ubuhlobo bobuchwephesha obulula lula kunye namaSulumane azungezile. Ngo-1221, uGenghis Khan wahlasela iSigodi saseBamiyan, esula abantu, kodwa ekushiya amaBuddha angatshatyalaliswa. Ukuhlolwa kwe-Genetic kuqinisekisa ukuba abantu baseHazara abahlala eBamiyan bavela kumaMongol.
Abaninzi abalawuli bamaSilamsi kunye nabahambahambayo kuloo ndawo bavakalisa ukuzibuza kwiimifanekiso, okanye bahlawuliswa. Ngokomzekelo, uBabur , umsunguli wobukhosi bukaMughal , wadlula kwiBlamyan Valley ngo-1506-7 kodwa akazange akhulume ngamaBuddha kwincwadi yakhe. Kamva umlawuli waseMughal u- Aurangzeb (u-1658-1707) waxelelwa ezama ukutshabalalisa amaBuddha esebenzisa izixhobo zokulwa; Wayenomdla okhuselekileyo, kunye nomculo ovinjelwe ngexesha lokulawula kwakhe, ngomfuziselo wolawulo lwaseTaliban. Impendulo ye-Aurangzeb yayikuphela, nangona kunjalo, akukho myalelo phakathi kwababukeli bamaSulumane beBamiyan Buddha.
Taliban Ukutshabalaliswa kweBuddha, ngo-2001
I-niche engenanto apho uBuddha uBamiyan wayemi khona; amaBuddha achithelwa yiTaliban ngo-2001. I-Stringer / Getty Izithombe
Ukususela ngo-Matshi wesi-2, 2001, kwaye ukuqhubeka ngo-Ephrili, ama-Taliban ahlasela amaBuddha aseBamiyan asebenzisa i-dynamite, iinqwelo zokulwa, iinqwelo-moya kunye nezixhobo zokulwa neenqwelo-moya. Nangona isiko lobuSilamsi lichasa ukubonakaliswa kwezithixo, akucaci isizathu sokuba amaTaliban akhethe ukudiliza iziqingqi, ezazimi iminyaka engaphezu kwe-1 000 phantsi kolawulo lwamaSilamsi.
Ukususela ngo-1997, i-ambassador ye-Taliban ePakistan yathi "iBhunga eliPhakamileyo liye lala ukutshatyalaliswa kweziqingqiweyo kuba akukho nkolo yazo." Ngomhla kaSeptemba ka-2000, inkokeli yeTaliban uMallah Muhammad Omar ibonise ubuchule bokhenketho bukaBamiyan: "Urhulumente ubona iimifanekiso zeBamiyan njengomzekelo wendlela enokubangela inzuzo kwi-Afghanistan kwiindwendwe zamazwe ngamazwe." Wathembisa ukukhusela izikhumbuzo. Ngoko yintoni eyatshintsha? Kutheni wayala ukuba amaBuddha Bamiyan abhujiswe emva kweenyanga ezisixhenxe emva koko?
Akukho mntu uyazi ngokuqinisekileyo ukuba kungani i-mullah yatshintsha ingqondo yakhe. Kwaye kwacatshulwa umphathi omkhulu waseTaliban esithi isigqibo "sasingumntu ohlambulukileyo." Abanye ababukeli bathi i-Taliban isabela kwisigwebo esinzulu, sasifuna ukuphoqelela ukuba banikele u-Osama bin Laden ; ukuba i-Taliban yayijezisa uhlanga lukaHazara lweBamiyan; okanye ukuba babhubhisa amaBuddha ukuze bathabathe ingqalelo entshonalanga kwindlala eqhubekayo e-Afghanistan. Nangona kunjalo, akukho nanye kule nkcazo inamanzi.
Urhulumente waseTaliban wabonisa ukungabi nandaba ngabantu base-Afghan kulo lonke elawulayo, ngoko iimpembelelo zomntu zibonakala zingenakwenzeka. Urhulumente ka-Mullah Omar naye wakhangela impembelelo yangaphandle (entshona), kubandakanywa uncedo, ngoko bekungeke kusebenzise ukutshatyalaliswa kweBuddha njengesiphakamiso sokuncedisa ukutya. Ngethuba i-Sunni Taliban yayitshutshisa i-Shiya Hazara, i-Buddha yayingaphambi kokuvela kwabantu bakaHazara kwi-Valley Bamiyan, kwaye yayingabandakanyekanga ngokukodwa kwiNkcubeko yaseHazara ukwenza loo ngcaciso ecacileyo.
Ingcaciso ekholisayo yokuguquguquka kwentliziyo ngokukhawuleza kwi-Bamiyan Buddha ingaba yimpembelelo ekhulayo ye- al-Qaeda . Nangona ukulahlekelwa kwintlawulo yezokhenketho, kunye nokungabikho kwesiphi na isizathu esichukumisayo sokutshabalalisa izithixo, amaTaliban aphekula izikhumbuzo zamandulo kwiindawo zabo. Abantu kuphela abakholwa ngokwenene ukuba yinto efanelekileyo yayinguOsama bin Laden kunye "namaArabhu," abo babekholelwa ukuba amaBuddha bezithixo eziza kutshabalaliswa, nangona kungabikho mntu u-Afghanistan namhlanje owakhonza kuzo.
Xa abatyatheli bezinye iintlanga babembuza uMollah Omar malunga nokutshatyalaliswa kweBuddha, bebuza ukuba bekungeke kube ngcono ukuvumela abatyeleli ukuba batyelele indawo, ngokubanzi wabanika impendulo eyodwa. Ukuphazamisa u- Mahmud waseGhazni , owawunqwenela ukunikezelwa kwentlawulelo waza watshatyalalisa ingqungquthela yamaSindu eShiva eSomnath, uMollah Omar wathi "Ndiyitshitshisa izithixo, kungekhona umthengisi wazo."
Yintoni elandelayo kuBamiyan?
Ukuvunwa kwengqolowa eBamiyan. Majid Saeedi / Getty Izithombe
Isiqhwithi somhlaba wonke sokubhikisha ngokutshatyalaliswa kweBamiyan Buddha kubonakala ngathi sathatha ubukhokheli beTaliban. Abaninzi abakubonayo, abangeke bave ngeemifanekiso ngaphambi koMatshi ka-2001, bacaphuke ngoku kuhlaselwa kwelifa lemveli yelifa.
Xa umbuso weTaliban wagxothwa ngamandla ngoDisemba 2001, emva kokuhlaselwa kwe-9/11 eUnited States, ingxoxo yaqala malunga nokuba amaBuddha eBamiyan ayenakwakhiwa kwakhona. Ngo-2011, i-UNESCO yamemezela ukuba ayizange ixhase ukuvuselelwa kwakhona kweBuddha. Kwakuxhomekeke emva kweBuddha iNdawo yeLifa leMveli ngowe-2003, kwaye mhlawumbi idibanise kwiNcwadi yeLifa leMveli eliNgcipheko ngaloo nyaka.
Njengoko lo mbhalo, ke ke, iqela leengcali zokulondolozwa kweJamani lizama ukuphakamisa imali yokuhlaziya iincinci zeBuddha ezimbini kwiingxube ezisele. Abemi abaninzi balapho babeza kwamkela ukuhamba, njengendlela yokukhwela iidola. Okwangoku, nangona kunjalo, ubomi bemihla ngemihla buya ngaphantsi kweenqwelwana ezingenanto kwiBlamyan Valley.
Dupree, uNancy H. Intlambo yeBamiyan , i-Kabul: I-Afghan Tourist Organisation, ngo-1967.
UMorgan, uLlewellyn. IiBuddha zeBamiyan , iCambridge: i-Harvard University Press, ngo-2012.
I-UNESCO Ividiyo, iNdawo yeNkcubeko kunye neNdawo yezoBuvubukulo zeBamiyan Valley .
Jordan | Iinkcukacha kunye neMbali
Indlela Yokujongana Namalungu Eentsapho NgesiTshayina saseMandarin
Ukudibanisa iiArrays kwiRuby